Run Time Error! please help me what the problem is. — MYSTERY ZILLION
Run Time Error! please help me what the problem is.
June 2011 edited June 2011 in Java
Compile time မှာ error မတက်ဘဲ run time မှာ error တက်နေလို့ပါ။
private ပေးထားတဲ့ y ကို comment /* */ ပေးထားပေမဲ့လဲ.
run လို့ မရနေလို့ပါ။
private int y=10;
protected int z=10;
private int getY()
private void setY(int y)
protected int getZ()
protected void setZ(int z)
public class SubclassInSamePackage extends BaseClass
BaseClass rr=new BaseClass();
SubclassInSamePackage subClassObj=new SubclassInSamePackage();
System.out.println("Value of x is:"+subClassObj.x);
/*System.out.println("Value of y is"+subClassObj.y);
System.out.println("Value of y is"+subClassObj.y);*/
System.out.println("Value of z is"+subClassObj.z);
System.out.println("Value of x is"+subClassObj.a);
file name ကို SubclassInSamePackage.java နဲ့သိမ်းပါတယ်။
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError:SubclassInSamePackage<wrong name: package1/SubclassInSamePackage>
Class Path Problem ဖြစ်နေတာပါ ကြည့်ရတာ Command Line မှာပဲ Compile and Execute လုပ်နေပုံရတယ် အဲဒါဆိုရင် အောက်မှာပြထားသလို Option တွေထပ်ထည့်ပေးလိုက်ပါ။
javac -classpath . SubclassInSamePackage.java
java -classpath . SubclassInSamePackage
-classpath ဆိုတာက.. file သိမ်းတဲ့လမ်းကြောင်းကို ထည့်ရမှာကိုပြောတာပါလား
Java\_jdk1.6.0\_bin အောက်ကိုပဲ သိမ်းတာပါ။ဘာဖြစ်လို့ NoClassDefFoundError ဖြစ်ရတာပါလဲ.
တခြားနေရာမှာသိမ်းတယ်ဆိုရင်လဲ path="C:\_..\_" ဆိုခေါ်ပြီး run ရတာမဟုတ်လားဟင်။
အခုမှ command line ကပဲ စမ်းနေတုန်းပါ.။
classpath ထည့်တာ ဘယ်လိုထည့်လဲ မသိဘူးနော်. <option>
javac path="C:\_Java\_jdk1.6.0\_bin".SubclassInSamePackage.java လို့ ရေးရမှာပါလား
file not found: ဆိုပြီး
Usage: javac < options > < source files >
use -help foralist of possible options ဆို error တက်ပါတယ်။
အင်း ငါ့တော့နာပြီထင်တယ် မေးခွန်းတွေက များများလာပြီ မူးအောင်မေးမယ့်သဘောရှိတယ်
ပြောဖို့တစ်ခုတော့ကျန်သွားတယ် အပေါ်ဆုံးက package pckage1; ကိုဖျက်လိုက်ပါ package တွေပါရင်ပိုပြီး ရှုပ်နေလိမ့်မယ် ပြီးရင် ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ Command အတိုင်းပဲ လုပ်လို့ရပါတယ် ဘာမှထပ်ထည့်စရာမလိုပါဘူး။
-classpath . မှာ . ဆိုတာက လက်ရှိ javac ကို execute လုပ်နေတဲ့ Path ကိုဆိုလိုတယ် အဲဒါကြောင့် class တွေကိုလိုက်ရှာရင် အဲဒီ့လက်ရှိနေရာကနေ အဆင့်ဆင့်လိုက်ရှာလိမ့်မယ် package တွေရှိရင် အဲဒီ့ Path အောက်မှာ Folder တွေနဲ့သူ့ရဲ့ package structure အတိုင်း အဆင့်ဆင့်ရှိရပါမယ်။
အဲဒီ့ -classpath . ကိုမပေးချင်ရင်လည်း Configure လုပ်လို့ရပါတယ် Environment Variables တွေအထဲမှာ CLASSPATH ဆိုတဲ့ Variable ရှိပါတယ် အဲဒီ့ Variable အထဲမှာ . ကိုထပ်ထည့်ပေးလိုက်ပါ။ ဥပမာဆိုရင် အရင်က CLASSPATH ထဲမှာ CLASSPATH = C:\_;C:\_Program Files\_Java\_; စသည်ဖြင့်ပေါ့လေ အဲလိုရှိရင် . ကိုထပ်ထည့်ပေးပါ အဲဒါဆိုရင် CLASSPATH = .;C:\_;C:\_Program Files\_Java\_; အဲဒါဆိုရင် Compiler မှာ -classpath . ထည့်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။